Inkampani Amasiko & Umlando - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Amagagasi Womoya Aqhubekela Phambili Ukuncintisana Okukhona
Amabhizinisi amancane naphakathi, ekulweni amagagasi, abantu baseHongda bamukela isimo sengqondo, ijubane elinamandla, bedlula ubuhlakani basendulo baseQuanzhou ngesimilo sethalente elihle lobuchwepheshe obuhlakaniphile, ukuhumusha kabusha "Akukho ukunqoba" koMoya.
Sibhekene nezinselelo ezintsha kanye nohambo olusha, ngomoya wokuqamba nokusebenza kanzima, sizothuthukisa umkhumbi wokunqoba emakethe yezingxenye ezithwala imishini yokwakha futhi siqhubekele phambili ngesibindi.
Uprofesa waseHarvard Business School ekhuluma, esikhathini esedlule ukubona ukusebenza kwenkampani kuphela ukubona le ncwadi, futhi manje ikakhulukazi esikweni lenkampani kanye nokuhlangana kwamasiko ezinkampani, okuyisikhiye senkampani ekuthuthukisweni okusimeme. Ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, isiko lamabhizinisi liyimfuneko edingekayo esigabeni esithile, umncintiswano wamabhizinisi wanamuhla ungomunye womncintiswano, kepha abantu bathembele kusiko ukuhlanganisa, inkampani da eyakhelwe eduze kwesiko elicwengekile, ukukhuthaza umoya weHongda, yakha ibhizinisi elihle elihambisanayo imvelo ngaphakathi kwebhizinisi ekwakheni umsebenzi omuhle, onenqubekela phambili, osebenza kanzima kanye nomoya, ngokususelwa kubo, ukwenza imisebenzi yabo.
Umoya webhizinisi: ukuthembeka okuhle. * Ulwazi oluzinikezele emisha
Ifilosofi yebhizinisi: iklayenti, imakethe
Umbono wokumaketha: ukudala ukufunwa nokusebenzela umphakathi
Kutholakale iQuanzhou Minzheng Transport Machining Plant
Uthole iQuanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
Imikhiqizo Yenkampani Engene Emakethe Yasekhaya Yomshini Wobunjiniyela
Imikhiqizo yenkampani efakwe eMakethe yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia Yezobunjiniyela
Imikhiqizo Yenkampani Engene Emakethe YaseYurophu Yezobunjiniyela Machinine
Thola Isihloko Sebhizinisi Lokugcizelela
iNkampani Yavula Isikhwama Esisizayo seFujian Jia Machinery Co., Ltd.
Kutholakale Ukuhweba Inkampani Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Kutholwe uLianhe Heavy Industry Co., Ltd.